Rano L-carnitine (541-15-1) mpanamboatra - Phcoker Chemical
Vola L-carnitine roat (541-15-1)
Ny vovo-carnitine dia natiora voajanahary voajanahary sy vitaminina ary ny sakafo fanampiny, mandray anjara lehibe amin'ny famokarana angovo amin'ny alalan'ny fitaterana ......
SKU: 541-15-1 Sokajy: Weight Loss
Karazana papyrus L-carnitine (541-15-1) voankazo
Rano L-carnitine poids (541-15-1) Specifications
Product Name Rano L-carnitine poids
Anarana simika CARNITINE, L-, CARNIFEED (R), CARNIKING (R), CAR-OH, ME3-Gamma-Abu (BETA-HYDROXY) -OH, (R) -BETA-HYDROXY-GAMMA- (TRIMETHYLAMMONIO) BUTYRATE, (R) -3-HYDROXY-4- (TRIMETHYLAMMONIO) BUTYRATE; VITAMIN B-GAMMA
Drug Class Vokatra voaaro
molekiolan'ny Formula C7H15NO3
molekiolan'ny Wvalo 161.2
mitsonika Point 197-212 ° C (lit.)
Toro-tavy: 287.5 ° C (tombanana)
Ny antsasaky ny biolojia 2 ~ 15 ora
Solubility H2O: 0.1 g / mL amin'ny 20 ° C, mazava, tsy misy loko
Rano L-carnitine poids Application 1) Sakafo ara-pahasalamana: Azo ampiasaina amin'ny vovo-dronono izy io mba hanatsarana ny sakafo.
2) Vokatry ny fihenam-bidy: Ny vovobony L-carnitine Rule dia afaka mandoro ny fiterahana manenika ao amin'ny vatantsika, ary avy eo dia alefa amin'ny angovo, izay afaka manampy antsika hisakafo.
3) Atletisma sakafo: Tsara ny manatsara ny hery entina mipoaka ary manohitra ny reraka, izay afaka manatsara ny fahaizantsika fanatanjahan-tena.
4) Fanampin'ny sakafo mahavelona amin'ny vatan'olombelona: Mihena ny votoatin'ny vovobony Raw L-Carnitine ao amin'ny vatantsika, noho ny fitomboan'ny vanim-potoantsika, noho izany dia tokony ampiantsika ny vovobony Raw L-Carnitine mba hihazonana ny fahasalaman'ny vatantsika.
Raw L-carnitine volo (541-15-1) Description
Ny vovobony L-Carnitine dia sakafo mahavelona izay avy amin'ny lysine amino sy mionionine. Ny anarany dia avy amin'ny tsy fisian'ny hain-trano (carnus) voalohany. Ny vovony poeta L-Carnitine dia misy fiantraikany amin'ny metabolisma sy ny fiarovana amin'ny mitochondrial. Ny voankazo L-carnitine roapaina dia tsy heverina ho zava-dehibe ny sakafo ara-panafody satria izy io no mampiavaka ny vatana, fa mety ho levona amin'ny sakafo ihany koa. Ny vatany dia mamokatra karnitina ao amin'ny atiny sy ny voa ary mitahiry izany ao amin'ny hozakaina, fo, atidoha ary vatomamy hafa. Ny fampitomboana ny vovobony L-carnitine dia tsy mandoro ny tavin-kena raha tsy hoe tsy ampy ny olona ao amin'ny vovokam-bolan'ny L-Carnitine manampy ny vatana hamokatra angovo. Zava-dehibe ho an'ny fo sy ny fiasan'ny atidoha, ny hetsiky ny hozatra, ary ny trosa maro hafa. Fa ny famokarana azy dia mety tsy mahafeno ny zavatra ilaina ao anatin'ny fepetra sasany toy ny fitomboan'ny fangatahana herinaratra ary noho izany dia heverina ho sakafo mahatsara tena tsy ilaina. Misy karazana roa (isomers) amin'ny carnitine, viz. Ny voankazo L-carnitine sy D-carnitine, ary ny L-isomer ihany no mavitrika.
L-Carnitine vovoka (541-15-1) Mechanism of Action
Ny l-carnitine dia tsy afaka mandray anjara amin'ny biosynthesis proteinina, fa mampiroborobo ny fampiasana ketônina sy ny taratry ny nitrogen amin'ny lafiny iray. Ny asany lehibe indrindra dia ny fampiroboroboana ny asidra fiteronan'ny asidra, izay mitranga ao amin'ny aty ary ny mitochondria amin'ny sela sela hafa. Fantatra fa ny asidra maimai-poana sy ny coenzyme Acyl A dia tsy afaka miditra amin'ny tranon-tsolika mitochondrialina, fa ny acylcarnitine dia afaka manao izany haingana. Noho izany dia tapa-kevitra fa ny vovobony L-carnitine dia ny entona mitondra transatida asidra ary ny acyl dia mamolaka ao amin'ny fonon-dasa mitochondrial. Tsy mbola fantatra ny fomba fiasan'ity fitaterana ity, saingy azo antoka fa ny carnitine acyl-CoA transferase dia ny enzyme manan-kery amin'io dingana io. Izy io dia misy isoenzymes roa, ny iray dia ny carnitine acyl-CoA transferase I, mipetraka eo amin'ny lafiny ivelany amin'ny membrane. Rehefa asidra asidra ny acyl-CoA-synthatase ny asidra fetsy mba hamokarana acyl-CoA, dia entona amin'ny carnitine acyl-CoA transferase I ao amin'ny menaka. Rehefa niditra tao amin'ny tranom-paty izy, dia atahorana ny isoenzyme faharoa - carnitine acyl-CoA transferase II - mba hivadika ho endrika acyl-CoA izay azo ampiasaina mivantana avy amin'ny enzymes catabolic astrona. Aorian'izany dia mamoaka angovo izy amin'ny alàlan'ny dingana toy ny dehydrogenation sy deoxygenation.
Ny L-carnitine dia afaka manitsy ny ratio of acyl amin'ny mitochondria, ka mitarika ny metabolism'ny herinaratra. Ny L-carnitine dia afaka mandray anjara amin'ny fitaterana metabolita asidan'ny asidra amine, izay mamporisika ny fivoarana ara-dalàna ny asidra amine amino.
Fampiharana ny L-carnitine volo (541-15-1)
Sakafo ara-pahasalamana: Azo ampiasaina amin'ny vovo-dronono izy io mba hanatsarana ny sakafo.
Vokatry ny fihenam-bidy: Ny vovobony L-carnitine dia afaka mandoro ny fiterahana manenika ao amin'ny vatantsika, ary avy eo dia alefa amin'ny angovo, izay afaka manampy antsika hanimba endrika.
Atleta sakafo: Tsara ny manatsara ny hery entina mipoaka ary manohitra ny reraka, izay afaka manatsara ny fahaizantsika fanatanjahan-tena.
Fanampiana amin'ny sakafo mahavelona amin'ny vatan'olombelona: Mitombo ny votoatin'ny vovobony Raw L-Carnitine ao amin'ny vatantsika, noho izany dia tokony ampiantsika ny vovobony Raw L-Carnitine mba hitazonana ny fahasalaman'ny vatantsika.
Recommended L-carnitine vovoka (541-15-1) Dosage
Ny dosage L-carnitine dia ny 500-2,000 mg isan'andro.
Na dia miovaova be aza ny dosage amin'ny fianarana hianarana, dia misy ny fijerena ny fampiasana sy ny doka amin'ny endrika tsirairay:
Acetyl-L-carnitine: Ity endrika ity dia tsara indrindra ho an'ny fahasalamana sy ny fiasan'ny atidoha. Doses dia miovaova amin'ny 600-2,500 mg isan'andro.
L-carnitine L-tartrat: Ity endrika ity dia mahomby indrindra amin'ny fanaovana fampisehoana. Doses dia miovaova amin'ny 1,000-4,000 mg isan'andro.
Propionyl-L-carnitine: Ity endriny ity dia tsara indrindra amin'ny fanatsarana ny fampidiran-dra ao amin'ireo olona manana tosidra ambony na aretina mifandray amin'ny fahasalamana. Doses dia miovaova amin'ny 400-1,000 mg isan'andro.
Ny 2,000 mg (2 gram) isan'andro dia toa azo antoka sy mahomby amin'ny fotoana maharitra.
Miorina amin'ny fijerena ny fikarohana, hatramin'ny 2,000 mg (2 gram) isan'andro dia toa azo antoka ho an'ny fampiasana maharitra sy ny doka mahomby amin'ny ankamaroan'ny karazana L-carnitine.
Benefits of L-carnitine volo (541-15-1)
♦ Heart Health: Ny fianarana sasantsasany dia maneho ny mety hisorohana ny tosidra sy ny dingan'ny aretina ao amin'ny fo.
♦ Manaova fampisehoana: Ny tombony azon'ny L-carnitine dia mety hitarika herinaratra na herinandro hipoitra. Tsy mitovy amin'ny fanafody toy ny kafeinina na ny kafe izany, izay afaka manatsara ny fampisehoana ara-panatanjahantena. Ohatra: ny fanasitranana amin'ny fanatanjahantena, ny fanomezana oksizenina hozatra, ny fampitomboana ny fihenam-bidy, ny fanamaivanana sasatry ny hozatra, ny famokarana sela mena.
♦ Karazana 2 Diabetes: Ny fandinihana iray momba ny olona voan'ny diabeta 2 karazana avy amin'ny fanafody fihinan'ny diabeta dia nampiseho fa nihena ny siramamy azo avy amin'ny fanafody carnitine, raha oharina amin'ny plasebo.
♦ Ny fiantraikany eo amin'ny atidoha: Tamin'ny fandalinana 90 andro, nisy olona nihinana fidinan'ny alkaola izay nitondra ny grama 2 amin'ny acetyl-L-carnitine isan'andro dia nahatsapa ny fanatsarana manan-danja amin'ny fepetra rehetra momba ny fiasan'ny atidoha.
♦ Weight Loss: Ny fanadihadiana sasantsasany momba ny fanadihadiana sivy, indrindra fa ny olon-dehibe na olon-dehibe, dia nahatsikaritra fa lany ny isan'ny lanjan'ny 2.9 kilao (1.3 kg) raha maka ny vovo-carnitine L-carnitine. Na izany aza, na dia manimba ny fahavoan'ny lanjany aza ny rafi-piterahana L-carnitine, dia mety ho kely ny fahavoan'ny fahavoazana.